အိန္ဒိယ: Nitin Gadkari: အဆိုပါအစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒဏ်ငွေမှတဆင့်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့ဘဝတွေကိုကယ်တင်နှင့်မဖြစ်ပါသည်: Nitin Gadkari နှင့်လမ်းသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: Nitin Gadkari: အဆိုပါအစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒဏ်ငွေမှတဆင့်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့ဘဝတွေကိုကယ်တင်နှင့်မဖြစ်ပါသည်: Nitin Gadkari နှင့်လမ်းသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: Nitin Gadkari: အဆိုပါအစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒဏ်ငွေမှတဆင့်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့ဘဝတွေကိုကယ်တင်နှင့်မဖြစ်ပါသည်: Nitin Gadkari နှင့်လမ်းသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတာဝန်ခံအဆိုပါဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Nitin Gadkari အစိုးရကတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောပါတယ် မော်တော်ယာဉ် အဆိုပါသင်္ဘော MV (သင်္ဘော MV အက်ဥပဒေ) အပေါ်ဥပဒေအရ။ လူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ပေမယ့်ဒဏ်ငွေ။
"ပထမ, သင်္ဘော MV အက်ဥပဒေဟာတစ်ပြိုင်တည်းစာရင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့်အလယ်ပိုင်းအစိုးရများကဒဏ်ငွေနှင့် ပတ်သက်. ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒဏ်ငွေနှင့်စပ်လျဉ်း 10 100 ရူပီးအထိတစ်ကွာဟမှုရှိပါတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်စေနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောနေတာနေစဉ်အစိုးရ "ဒဏ်ငွေမှတဆင့်ဝင်ငွေဝင်ငွေမရှိရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိပါတယ်, သူကပြောသည်။
မိမိအသဘောထားမှတ်ချက်ပုံဒဏ်ငွေလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ပညတ်တရားကိုမှေးမှိန်ဖို့စီစဉ်ထားသူအချို့ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းတစ်ခုမှတုန့်ပြန်ရောက်လာတယ်။
"ဒီပြဿနာကသူတို့ဥပဒေများကိုကွောကျရှံ့သို့မဟုတ်လေးစားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လူများ၏ဘဝကမပိုအရေးကြီးသောအဆိုပါဒဏ်ငွေကြောင့်ဖြစ်သနည်း သငျသညျပညတျတရားကိုချိုးဖျက်မထားဘူးဆိုရင်, သင်ဒဏ်ရိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါသည်လည်းသင်တို့၏အစီရင်ခံစာများ (မီဒီယာ) အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်တယ်။ အခုဆိုရင်လူတွေကသူတို့ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မတော်တဆမှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
အဆိုပါအပိုင်းအစမူဝါဒအပေါ်မှတ်ချက်ပေး, ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်: "တကယ်တော့ကျနော်တို့စီမံကိန်းပြီးသားပြင်ဆင်ကြပြီ။ ဒါပေမယ့်ပြဿနာများ၏အချို့သောကာယကံရှင်များမဆိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဘဏ္ဍာရေးများ၏ခွင့်ပြုချက်ကျနော်တို့ကလုပ်နေတာ, ထုတ်လုပ်သူများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းဖို့က၎င်း၏အကောင်းဆုံးမနဲ့ကျွန်မတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်ကျနော်တို့စွန့်ပစ်ခြင်းမူဝါဒနှင့်ရှေ့ဆက်သွားရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ "
အိန္ဒိယ: အကြမ်းဖက်မှုသည်ယခုအခါတစ်ဦး "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှု" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်နက်ရှိုင်းစွာပါကစ္စတန်၌အမြစ်တွယ်လျက်ရှိသည်: န်ကြီးချုပ်မိုဒီ | အိန္ဒိယသတင်း
ဝန်ကြီးချုပ် Boubou Cissé၏ခရီးစဉ်သည်ပြင်သစ်တွင်ဆက်လက်
သင်4$ - BGR အတွက် 0,99 Amazon Music Unlimited လကိုသတင်းပို့သည်
အိန္ဒိယ - သင်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုမတုံ့ပြန်ပါနှင့်။ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် ၀ န်ကြီးများသည် ၀ န်ကြီးများကို ၀ န်ကြီးဌာနများသို့ | အိန္ဒိယသတင်း
မြူနီစီပယ် 2020: မဖြစ်နိုင်ဆက်ခံနိုင်သည့်မာဆေး - ဗီဒီယို
ဖျက်သိမ်းလိုက်သော Magic Diezel ခရီးစဉ်မှ Chico Lacoste: "ဒီအခြေစိုက်စခန်းဟာယိုယွင်းနေပြီ"
Lionel Messi သည်3ရှိ Pell ထံမှကမ္ဘာ့စံချိန်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Lionel Messi - ဗီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,791